Method for hamantarana rano zavona Transmittance ny fitsaboana fonosana - China Wellform fonosana Group
Method ho an'ny maso ny rano zavona permeability ny fitsaboana kitapo
Medical harona sy ny fahazavana lanja, avo hery, tsara famehezana sy ny fanerena sy ny tombontsoa, dia tsikelikely fanoloana ny fitsaboana tavoahangy vera, no be am-bava ampiasaina amin'ny fitsaboana sy ny ranon-javatra mafy fonosana fanafody sokajy. Water zavona dia zava-dehibe mahakasika ny toetra sy ny fiarovana ny zava-mahadomelina, mba tsy ny fiantraikan'ny drano zavona amin'ny zava-mahadomelina, dia tokony hanana kitapo ara-pitsaboana tsara ny hamandoana fanoherana mba hahazoana antoka vokatra kalitao sy ny fiarovana. Eto amin'ity taratasy, etona ny rano permeability rafitra fitiliana ny mpitsabo dia fohy nampidirina kitapo miaraka amin'ny Labthink ny PERME BMI W3 / 330 etona ny rano tahan'ny fifindran'ny rafitra fitiliana.
Water zavona tahan'ny fifindran'ny no tena manondro ny fitsaboana kitapo eo amin'ny fitokana-monina ny rano etona, hamandoana fanoherana miasa misy fiantraikany mivantana ny hatsaran'ny zava-mahadomelina teo amin'ny fiainana talantalana ny entana, fa koa lafin-javatra manan-danja ao amin'ny fanadihadiana ny talantalana fiainana. Taorian'ny fisafoana dia afaka mitana ny rano etona saro-pady sy ny zava-mahadomelina ny fisian'ny bobongolo mando fanontaniana.
Labthink W3 / 330 ny rano zavona permeability fitiliana rafitra, electrolytic sensor fitiliana fitsipika, ny fitaovana mampiasa telo fitiliana efi-trano tafiditra andian-tsoratra ny patented teknolojia, solosaina fanaraha-maso, tanteraka mpanao fizahan-toetra, clamping santionany, tsindrio eo amin'ny fanandramana izay afaka manao ny dingana voalohany mba manandrana, dia ento ny dingana voalohany mba hamaranana ny hamandoana, mari-pana, mikoriana ny tahan'ny sy ny tanjona ny fanaraha-maso, ny andrana vita ny dingana voalohany mba hamantatra sy olana fanambarana. Ny fitaovana dia afaka ihany koa ny mampifandray sivy zanabolana milina, ny fitsapana ny 30 santionany amin'ny farany, na eo amin'ny asa ny ambaratongam-automatique, fitsapana hery, maso vahaolana sy ny maso fetra efa tonga ny iraisam-pirenena mandroso lenta, ary maro ny tanjona koa foana ny tari-dalan'ny .
Ny dingana andrana dia toy izao manaraka izao: ny mialoha tsaboina blister santionany dia napetraka tao amin'ny efi-trano fitsapana, sy ny azota ny hamandoana ilaina dia mavitrika teny ivelan'ny ny blister entana. Ny avo fahadiovana azota dia miasa ao anatin'ny blister fonosana noho ny fisian'ny hamandoana gradient, ny hihaviany molekiola hamaky ny horonantsary avy any ivelany ny blister ny ao anatiny sy avo fahadiovana azota, nentin'ny mavitrika azota ho an'ny sensor, ny alalan 'ny sensor handrefesana etona ny rano fitanana fanadihadiana, ary avy eo dia manao kajy ny rano sy ny zavona permeability masontsivana ho any ny fanoherana ny fakam-panahy dia santionany fizahana.
Mazava ho azy, amin'ny fiantohana ny fitsaboana fonosana kitapo-drano zavona amin'ny alalan'ny lasibatry rehefa avy nandalo, fa mila tanjona hafa toy ny hamandoana fanoherana, famehezana, sns mifehy, mba ho azo antoka ny kalitaon'ny entana mandritra ny fiainana talantalana.
Post fotoana: Jun-13-2018